Wholesale Graphene kudziyisa ziso mask Mugadziri uye Mutengesi | Sheerfond
Iyi ndiyo graphene yekupisa ziso mask. Ichi chigadzirwa chinonyanya kubvisa kuneta kwemaziso uye kukurudzira kutenderera kweropa. Iko kupisa kunoshandisa graphene zvinhu. Kana izvo zvigadzirwa zve graphene zvikaipisa, vanogona kusunungura mafungu emhepo ari kure, ayo anogona kusimudzira ropa revanhu. Kutenderera, bvisa kuneta kwemaziso.
Ichi chigadzirwa chinoshandisa graphene yekupisa hetera, ayo ari ekutanga kudziyisa zvishongedzo, zvakagadzirwa nekambani yedu, uye kambani yedu ine nyowani graphene yekutsvaga zvinhu uye timu yekusimudzira iyo yachinja bhizinesi. Iyo graphene poda inogadzirwa isu pachedu inogadzirwa kuva graphene sheet kuburikidza needu patent tekinoroji, uye ipapo iyo graphene jira inodhindwa pane iyo PI substrate, uye maelektrode anoitwa kumagumo ese maviri eiyo graphene yekupisa kupfeka.
Paunenge uri muhofisi kana kumba, uchida zororo rekudya kwemasikati, kana kusunungura maziso ako, unogona kusarudza chigadzirwa ichi kukurudzira kutenderera kweropa kuburikidza neanopisa anodzvinya, ayo anogona kukurumidza kubvisa kuneta kwemaziso.
Inoda charger ye5V2A kana bhengi remagetsi kuti ishandise, izvo zviri nyore kushandisa.
Ichi chigadzirwa chine magiya matatu, tembiricha iri 30 ℃, 37 ℃ uye 42 ℃, unogona kusarudza giya zvinoenderana nezvaunoda.
Paunenge uchisuka chifukidzo cheziso, bvisa chinhu chekupisa kubva mumask yeziso kuchengetedza chinhu chekupisa kubva mukukuvara
Chigadzirwa chine hupenyu hwakareba hwebasa uye hunogona kushanda uchienderera mberi kwemaawa zviuru zvishanu.
Chigadzirwa ndicho chitsva chekugadzira chipo uye chakachipa, uye chakakodzera zvipo zvekusimudzira, zvipo zvebhizinesi, zvipo pakati pemhuri neshamwari, zvakadai sezvipo zveZuva raAmai, chipo chekisimusi
Iyo huru parameter:
Muenzaniso Nha. YZ-01
Gr30 ℃ / 37 42/42 ℃
Maitiro Ekushandisa Pr Nyowani Bhizinesi Kubhadhara, zvipo zvekuzvarwa, zuva rababa, zuva raamai, zvipo zvekutenda
Mashoko ， Silika
Kukura kwechigadzirwa 220mm * 100mm * 10mm
chigadzirwa uremu 25g
Pasuru kukura 225mm * 105 * 24mm
Huwandu nechimwe chinhu
Kurema kwebhokisi 10kg
Pashure: Wireless kuchaja chikomboredzo
Zvadaro: Graphene kupisa shawfu